Ịchịkwa Mmetụta - Gịnị bụ Mmụọ Nsọ?
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Ịchịkwa Mmetụta - Gịnị bụ Mmụọ Nsọ
Gịnị bụ Mmụọ Nsọ? - A chịkọtara mmụọ nsọ
Mmụọ Nsọ na -ekwu maka okike
Ihe Hibru na Greek pụtara maka mmụọ
Mmụọ Nsọ bụ Mmetụta Ịchịkwa Chineke
Mmụọ Nsọ bụ ihe atụ nke “aka” ma ọ bụ “mkpịsị aka” nke Chineke
Mmụọ Nsọ na -egosipụta ike nke Chineke
Mmụọ Nsọ bụ Mmụọ Chineke nke enyere ndị mmadụ nke sitere na Nna
Mmụọ Nsọ bụ ihe a ga -anata "(dị ka onyinye)
Mmụọ Nsọ bụ ihe a 'ga -ejupụta'
Mmụọ Nsọ bụ ihe ga -abụ “n'ime”
A na -enyefe Mmụọ Nsọ, na -ekesa ma na -ekesa
Mmụọ Nsọ bụ ihe “eyiri” ma ọ bụ “Tinye n'ime”, “daa n’elu”, ma ọ bụ “awụpụ”
Amaokwu Akwụkwọ Nsọ nke jiri mmụọ nsọ tụnyere ihe 'dakwasịrị' ma ọ bụ 'gbadata' ma 'nọrọ':
Amaokwu Akwụkwọ Nsọ na -akọwa Mmụọ Nsọ na ihe 'wụpụrụ':
'E mere ya' mmụọ nsọ 'ma bụrụ' mmiri na -enye ndụ 'nke anyị nwere ike' Dụọ '
Mmụọ Nsọ na -arụ ọtụtụ ọrụ Chineke
Enwere ike imegide mmụọ nsọ, guzogide, ghaara ya ụgha, nwee mwute, gbanyụọ ya ma kwuluo ya
Gịnị bụ nkwulu nke Mmụọ Nsọ?
Mmụọ Nsọ na -eme Chineke nkeonwe mana ọ bụghị onye nkịtị
Mmụọ Nsọ bụ ume ma ọ bụ ifufe nke Chineke. Ọ bụ mmetụta ịchịkwa Chineke nke na -emekọrịta ihe na mmadụ na ụwa. Site na Mụọ Nsọ, “aka nke Chineke” dịkwasịrị anyị, mmụọ nsọ na -anọchikwa anya “mkpịsị aka” nke Chineke. N'ụzọ dị iche iche, Mmụọ Nsọ na -egosipụta ike nke Chineke iji mezuo uche Chineke. Ọ bụ Mmụọ Chineke, nke Chineke nyere bụ nke “sitere na Nna” dị ka “onyinye sitere n'eluigwe” nke ndị kwere ekwe kwesịrị 'ịnata,' 'jupụta,' ma banye ''. Mmụọ Nsọ bụ ihe a pụrụ 'iyikwasị,' '' tinye, '' tinye 'n'ime. Enwere ike ibufe ya site n'otu onye gaa na onye ọzọ, kewaa ya, ma ekewaa ya. Mmụọ Nsọ “dakwasịrị” wee 'wụpụ' ka ndị 'ejiri mmụọ nsọ mee ndị kwere ekwe baptism'. Ndị kwere ekwe 'ga -a drinkụ' ma 'detụ' 'mmiri ndụ a'. Anyị kwesịrị ikwu okwu na ikpe ekpere “n'ime mmụọ” ka ọ na -arụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche nke Chineke na ndụ anyị. A na -eme ka ọnụnọ Chineke pụta ìhè site na Mmụọ Nsọ dịka a na -akasi obi, na -adụ ọdụ, ma na -eduzi anyị. Anyị ga -akpachara anya ka anyị ghara inupụ isi, iguzogide, iru uju, imenyụ ma ọ bụ kwulu mmụọ ịchịkwa Chineke. Mmụọ Nsọ nwere ike bụrụ mmadụ n'ụdị nke na -egosipụta ụdị onye Chineke bụ n'agbanyeghị na ọ bụghị n'ụzọ nkịtị.
Mmụọ Nsọ bụkwa akụkụ nke Chineke gbasara mmetụta nchịkwa ya. Site n'okwu Chineke (Logos) na site na ume Chineke, Mmụọ Nsọ, e mere ihe niile. Otu a ka okike mbụ (Adam mbụ) si malite na otu a ka Jizọs Kraịst (Adam ikpeazụ) si malite.
(Abụ Ọma 33: 6) Site na okwu Jehova e kere eluigwe, na site na ume nke ọnụ ya
Site na okwu Jehova e kere eluigwe, na site na ume nke ọnụ ya onye ọbịa ha niile.
—Abụ Ọma 104: 29-30. Mgbe ị na -ezipụ mmụọ gị, a na -eke ha
I zobe iru -Gi, ha atu ujọ; mgbe ị na -ewepụ ha ume, ha na -anwụ wee laghachi n'ájá ha. Mgbe ị na -ezipụ mmụọ gị, a na -eke ha, ị na -emekwa ka ihu ala dị ọhụrụ.
Jenesis 2: 7, Jehova Chineke kpụrụ mmadụ nke ájá sitere n'ala na wee kuo ume ume ndụ na -adị n'oghere imi ya
mgbe ahụ Jehova Chineke kpụrụ mmadụ nke ájá sitere n'ala na wee kuo ume banye n’oghere imi ya ume ndụ, mmadụ ahụ wee ghọọ ihe e kere eke dị ndụ.
(Job 33: 4) Mmụọ nke Chineke mere m, na ume nke Onye puru ime ihe nile nyem ndu.
Mmụọ nke Chineke mere m, na ume nke Onye puru ime ihe nile nyem ndu.
Luk 1:35 (NLT) Mmụọ Nsọ ga -abịakwasị gị, ike nke Onye Kasị Elu ga -ekpuchikwa gị
Okwu maka mmụọ n'asụsụ Hibru bụ njiri nke pụtara ume, ikuku, mmụọ. N'otu aka ahụ, okwu Mmụọ Nsọ n'asụsụ Grik sitere na nchikota okwu nnukwu nsogbu (πνεῦμα ἅγιον), nke pụtara n'ụzọ nkịtị, "ikuku na -emegharị - nke ahụ bụ ihe dị nsọ". Mmụọ Nsọ (Pneuma.
Akwụkwọ ọkọwa okwu siri ike
h7307. Rịa; site na 7306; ifufe; site n'iyi ume, ntụgharị iku ume nke ezi uche dị na ya (ma ọ bụ ọbụna ime ihe ike); n'ụzọ ihe atụ, ndụ, iwe, enweghị nkwado; site na mgbatị, mpaghara mbara igwe; site na mmụọ yiri, mana ọ bụ naanị onye nwere ezi uche (gụnyere ngosipụta ya na ọrụ ya):-ikuku, iwe, mgbawa, iku ume, x dị jụụ, obi ike, uche, x nkeji iri na ise, x n'akụkụ, mmụọ ((-ual)), oke ikuku, x efu, ((whirl-)) ifufe (-y).
G4151. ne pneuma; site na 4154; ikuku ugbu a, ya bụ ume (mgbawa) ma ọ bụ ikuku; site na ntụnyere ma ọ bụ n'ụzọ ihe atụ, mmụọ, ya bụ (mmadụ) mkpụrụ obi ezi uche, (site na ntinye) ụkpụrụ dị mkpa, ọnọdụ uche, wdg, ma ọ bụ (karịrị mmadụ) mmụọ ozi, mmụọ ọjọọ, ma ọ bụ (Chukwu) Chineke, mmụọ nke Kraịst, Mmụọ Nsọ. : -mọ, ndụ, mmụọ (-ualual, -ually), mind.
πνεῦμα, ατος, τό. (1) dị ka enwetara site na πνέω (ịfụ), nke ngagharị ikuku; (a) ịfụ, ikuku (ikekwe JN 3.8a na HE 1.7); (b) iku ume, ume (2TH 2.8; ikekwe MT 27.50 n'echiche "ọ ku ume ume ya")
Enwekwara mmekọrịta n'etiti Mmụọ na ume ma ọ bụ ifufe Chineke n'amaokwu ndị a:
JOB 26:13 Ewe me ka elu -igwe di nma na ifufe -Ya
N'aka ya ifufe mere eluigwe ngosi.
Job 32: 8, Ma ọ bụ mmụọ dị n'ime mmadụ, ume nye Onye Pụrụ Ime Ihe Niile
Mana ọ bụ Mmụọ n'ime mmadụ, ume nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, nke ahụ na -eme ka ọ ghọta.
(Jọn 3: 8) Ifufe na -efe. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla a mụrụ site na Mmụọ Nsọ
The ifufe na -efe ebe ọ chọrọ, ị na -anụkwa ụda ya, mana ị maghị ebe o si bia na ebe ọ na -aga. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla a mụrụ site na Mmụọ Nsọ. "
Okwu Grik maka Mmụọ bụ pheuma. A kọwara ojiji nke okwu a n'ime Agba Ọhụrụ na ihe odide Ndị Kraịst ndị ọzọ n'oge mbụ na Greek-English Lexicon (BDAG) dị ka ndị a:
(1) ikuku na -emegharị, na -afụ, na -eku ume
(2) nke na-eme ka ahụ dị ndụ ma ọ bụ na-enye ndụ, ume, (ndụ-) mmụọ
(3) akụkụ nke ụdị mmadụ, mmụọ
(4) onye na -abụghị anụ ụlọ nke nọọrọ onwe ya, na nkwekọrịta nkwekọrịta nke anụ ahụ nke mmụọ nwere ike ịhụ
(5) Ịbụ Chineke dị ka mmetụta na -achịkwa, na -elekwasị anya na mkpakọrịta na mmadụ, Mmụọ
"Ịbụ Chineke dị ka mmetụta na -achịkwa, na -elekwasị anya na mkpakọrịta na mmadụ" bụ akụkụ dị mkpa na ihe Mmụọ Nsọ bụ. Nke ahụ bụ, ọ bụ mgbatị nke ịbụ Chukwu, nke sitere na Chineke, na -emekọrịta ma na -emetụta ndị mmadụ. Ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ na -akwado nghọta a:
N'ihi na ọ dịghị amụma ọ bụla nke sitere n'uche mmadụ bupụta, kama Ndị mmadụ kwuru okwu site na Chineke ka Mmụọ Nsọ na -edu ha
Jọn 3:34 (ESV), Fma -ọbu ọ n givesnye Mọ Nsọ n withoutnweghi ọtùtù
N'ihi na onye ahụ Chineke zitere na -ekwu okwu Chineke, n'ihi na O n givesnye Mọ Nsọ n withoutnweghi ọtùtù."
Ọpụpụ 31: 3, Site na mmụọ nke Chineke, nwere ikike na ọgụgụ isi, jiri ihe ọmụma na nka niile
emejuwokwa m ya site na Mọ nke Chineke, n'ikike na ọgụgụ isi, na ihe ọmụma na nka niile, iji chepụta ihe osise, iji rụọ ọrụ n'ọlaedo, ọlaọcha, na ọla, n'ịkpụ nkume maka ịwa osisi, na n'ilu osisi, ịrụ ọrụ aka ọ bụla.
Ọnụ Ọgụgụ 11:25 (NIV) Were ụfọdụ nke Mmụọ - tukwasi ya n'isi ọgu ndi -okenye atọ na iri ahu - Mọ ahu we dikwasi ha - ha buru amuma
Jehova wee gbadata n'igwe ojii wee gwa ya okwu na were ụfọdụ nke Mmụọ Nsọ nke ahụ dị na ya na tụkwasị ya ndị okenye iri asaa ahụ. Na ozugbo Mmụọ dịkwasịrị ha, ha buru amụma
1 Samuel 10: 6 (NIV) Mmụọ nke Jehova ga -adakwasị gị, ị ga -ebukwa amụma - n'ihi na Chineke nọnyeere gị
Mgbe ahụ Mmụọ Jehova ga -adakwasị gị, ị ga -ebukwa amụma soro ha wee bụrụ nwoke ọzọ. Ugbu a, mgbe ihe ịrịba ama ndị a zutere gị, mee ihe aka gị hụrụ ime, n'ihi na Chineke nọnyeere unu
Nehemaịa 9: 29-30 (ESV), Ị tachiri obi ruo ọtụtụ afọ na jiri mmụọ gị dọọ ha aka na ntị site n'ọnụ ndị amụma gị
Ọtụtụ afọ ka ị were ha na jiri mmụọ gị dọọ ha aka na ntị site n'ọnụ ndị amụma gị. Ma ha a giveaghị ntị ...
(Aịsaịa 59:21, NIV) Mmụọ m nke dị n'elu gị, na okwu m nke m tinyeworo n'ọnụ gị
“Ma mụ onwe m, nke a bụ ọgbụgba ndụ m na ha,” ka Jehova kwuru.Mmụọ m nke dị n'elu gị, na okwu m nke m tinyeworo n'ọnụ gị, agaghị esi n'ọnụ gị pụọ ... "
Ọrụ Ndịozi 10:38 (NIV) Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ
otú Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu. n'ihi na Chineke nọnyeere ya.
1 Ndị Kọrịnt 2: 10-12. Ọ dịghị onye na -aghọta echiche Chineke ma e wezụga mmụọ nke Chineke
Ihe ndị a ka Chineke kpugheere anyị site na Mmụọ. N'ihi na Mmụọ na -enyocha ihe niile, ọbụna omimi nke Chineke. N'ihi na ònye maara echiche mmadụ ma e wezụga mmụọ nke onye ahụ, nke dị n'ime ya? Otu a kwa ọ dịghị onye na -aghọta echiche nke Chineke belụsọ mmụọ nke Chukwu. Ugbu a anyị anabataghị mmụọ nke ụwa, kama mmụọ nke sitere na Chineke, ka anyị wee ghọta ihe ndị Chineke nyere anyị n'efu.
“Mmụọ nke Chukwu” yiri “aka” ma ọ bụ “mkpịsị aka” nke Chineke. Dịka aka mmadụ na mkpịsị aka mmadụ na -edo onwe ha n'okpuru uche mmadụ, otu ahụ ka mmụọ nke Chineke na -edo onwe ya n'okpuru uche Chineke. Mmadụ na -eme ihe aka ya na -eme. N'otu aka ahụ, ọ bụ Chineke n'onwe ya na -arụ ọrụ a na -arụ site na ịgbatị aka na mkpịsị aka ya. Site na Mmụọ Nsọ, a na -etinye uche Chineke n'ọrụ, na -eme ihe ahụ o zitere ya ka ọ rụọ.
EZIKIEL 1: 3 Aka Jehova di n'aru ya
na okwu Jehova ruru zigara Ezekiel onye nchụàjà, nwa Buzi, n'ala ndị Kaldea n'akụkụ ọwa mmiri Cheba, aka Jehova we dikwasi ya Ebe ahụ
EZIKIEL 3:14 Mmụọ a - aka Jehova dị ike n'ahụ m
Mmụọ buliri m elu wee kpọrọ m pụọ, wee banye n'ime obi ilu n'ime mmụọ m, aka Jehova di ike n'arum.
Ezikiel 37: 1, Aka Jehova dịkwasịrị m - n'ime mmụọ
Aka Jehova dịkwasịrị m, o wee kpọpụta m na Mmụọ nke Jehova ma dọba m n'etiti ndagwurugwu ahụ; ọ jupụtara n'ọkpụkpụ.
2 Ndị Eze 3: 15-16 aka Jehova dakwasịrị ya
Ma ugbu a, wetaara m onye na -akụ egwu. ” Na mgbe onye na -egwu egwu na -akpọ, na aka Jehova dakwasịrị ya. O wee sị, "Otú a ka Jehova siri, 'M ga -eme ka ọdọ mmiri jupụta na akọrọ a.'
Matiu 12:28 (NIV) Site na mmụọ nke Chukwu nke m na -achụpụ mmụọ ọjọọ
"Ma ọ bụrụ na ọ dị site na Mọ nke Chineke nke m na -achụpụ mmụọ ọjọọ, mgbe ahụ alaeze Chineke abịakwasịwo unu ”
Luk 11:20 (NLT) Site na mkpịsị aka Chineke ka m na -achụpụ mmụọ ọjọọ
"Ma ọ bụrụ na ọ dị site na mkpịsị aka Chineke nke m na -achụpụ mmụọ ọjọọ, mgbe ahụ alaeze Chineke abịakwasịwo unu. ”
A na -ejikarị okwu na ike na mmụọ agbanwere ebe ọ bụ na Chineke na -arụ nnukwu ọrụ site na Mmụọ ya na site n'ike ya. Ọ bụchaghị eziokwu ịsị Mmụọ Nsọ bụ ike nke Chineke, mana ndị mmadụ na -enweta ike mgbe Mmụọ Nsọ bịakwasịrị ha. A na -enweta ike nke Chineke, dị ka ọrụ ebube gosipụtara n'ime ndị mmadụ, site na usoro nke mbụ gụnyere imeju Mmụọ Nsọ, emesia ọrụ ike ma ọ bụ mmụọ nsọ. Site na Mmụọ Nsọ, mmetụta na -achịkwa nke Chineke, anyị nwere ike imekọrịta ihe n'ike na uche nke Chineke. dị ka Jud 1:20 si kwuo, ike nke Chineke sitere na Mmụọ Nsọ, nke na -asị, “Ma unu, ndị m hụrụ n'anya, na -ewuli onwe unu elu n'okwukwe gị nke kachasị nsọ na na -ekpe ekpere n'ime Mmụọ Nsọ”. N'ihi ya, ikpe ekpere n'ime mmụọ nsọ bụ ụzọ anyị na Chineke si emekọrịta ihe iji nata mmanụ na ike ya - Mmetụta ịchịkwa Chineke. Ọtụtụ ihe atụ bụ ndị a:
Ndị ikpe 14: 5-6 Mmụọ nke Jehova wee dakwasị ya - ọ dọwara ọdụm dị ka onye na -adọwa nwa ewu
Samson we so nna -ya na nne -ya rida na Timna, ha we biarue ubi -vine Timna. Ma, le, nwa ọdụm na -abịakwute ya na -ebigbọ. Mgbe ahụ Mmụọ nke Jehova wee dakwasị ya, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ọ bụla n'aka ya, ọ dọwara ọdụm ahụ ka ọ na -adọwa nwa ewu...
Ndị Ikpe 15:14. Mọ nke Jehova we dakwasi ya n'ike, ab hisu -ya nile we b offaze n'aka -ya
Mgbe ọ bịarutere Lihaị, ndị Filistia bịara iti mkpu izute ya. Mmụọ Jehova wee dakwasị ya, ụdọ ndị ahụ dị n'aka ya wee dị ka flax nke mụnye ọkụ, agbụ ya gbazekwara n'aka ya..
Mọ -ozi ahu we za ya, si,The Mmụọ Nsọ ga -abịakwasị gị, ike nke Onye Kasị Elu ga -ekpuchikwa gị; ya mere nwa a ga -amụ ga -akpọ onye dị nsọ — Ọkpara nke Chineke.
Ọrụ 1: 8 (ESV), ị ga -enweta ike mgbe Mmụọ Nsọ bịakwasịrị gị
“Ma ị ga-enweta ike mgbe Mmụọ Nsọ bịakwasịrị gị, unu ga -abụkwa ndị àmà m na Jeruselem, na n'ime Judia na Sameria niile, ruokwa nsọtụ ụwa. ”
Ọrụ Ndịozi 2:4 (NIV) Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ike ikwu
na ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ike ikwu.
Ọrụ 4:31 (ESV), Ndị ahụ bụ fya na mmụọ nsọ na -aga n'ihu na -ekwu okwu Chineke n'atụghị egwu
Mb whene ha kpesiri ekpere, ebe ha nọkọtọrọ na ya me nkpatu, ha niile jupụta na Mmụọ Nsọ wee gaa n'ihu na -ekwu okwu Chineke n'atụghị egwu.
otú Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya.
Ndị Rom 15:19 (NIV) Site n'ike nke ihe iriba ama na ihe iju anya, site n'ike nke mmuo nke Chukwu
Site n'ike nke ihe iriba ama na ihe iju anya, site n'ike nke mmuo nke Chukwu—Ya mere na site na Jerusalem na gburugburu ya ruo Ilirikọm, emechala m ozi nke ozioma nke Kraịst
Ọtụtụ ndị akaebe Akwụkwọ Nsọ na -eme ka o doo anya na Mmụọ Nsọ, bụ onyinye sitere n'aka Chineke nke sitere n'aka Nna. Enwere ihe dị iche n'etiti Chineke “Onye na -enye” na “Onyinye” nke sitere na Chineke, Mmụọ Nsọ - mmetụta nchịkwa nke Chineke.
1 Ndị Tesalonaịka 4: 8 Chineke, onye na -enye gị Mmụọ Nsọ ya
Ya mere onye ọ bụla nke na -eleghara ihe a anya, ọ na -eleghara ọ bụghị mmadụ mana Chineke, onye na -enye gị Mmụọ Nsọ ya.
Jọn 15:26, Mmụọ nke eziokwu, nke si na Nna pụta
“Ma mgbe onye inyeaka ahụ, onye m ga -ezitere unu site na Nna, Mmụọ nke eziokwu, nke si na Nna pụta...
Ọrụ Ndịozi 2:33 (NIV) Ebe ọ natara n'aka Nna nkwa nke Mmụọ Nsọ
“Ebe e buliri ya elu n'aka nri Chineke, ebe ọ natara n'aka Nna m nkwa nke Mmụọ Nsọ, ọ wụpụwo ihe a nke unu onwe unu na -ahụ ma na -anụkwa. ”
Ọrụ Ndịozi 5:32 (NIV) Mọ Nsọ, onye Chineke nyere ọnọ mbon oro ẹkopde uyo esie
“Anyị bụkwa ndị akaebe ihe ndị a, otu a ka ọ dịkwa Mọ Nsọ, onye Chineke nyere ndị na -erubere ya isi. "
Ọrụ Ndịozi 15:8 (NIV) Chineke - na -enye ha Mmụọ Nsọ dịka o nyekwara anyị
na Chineke, onye maara obi, gbaara ha ama, site na -enye ha Mmụọ Nsọ dịka o nyekwara anyị,
Ọrụ Ndị Ozi 10:38 (NIV) Chineke ji mmụọ nsọ na ike tee Jizọs onye Nazaret mmanụ
otú Chineke ji mmụọ nsọ tee Jizọs onye Nazaret mmanụ na ike. O wee na -eme ihe ọma, na -agwọkwa ndị niile ekwensu na -emegbu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya.
Ndị Hibru 2: 4 (NIV) Chineke gbakwara ama site onyinye nke Mmụọ Nsọ ekesa dị ka uche ya si dị
mgbe Chineke gbakwara ama site n'ihe ịrịba ama na ihe ebube na ọrụ ebube dị iche iche na site n'onyinye nke Mmụọ Nsọ ekesa dị ka uche ya si dị.
1 Jọn 3:24 (ESV), Mmụọ onye o nyere anyị
Onye ọ bụla nke na -edebe ihe o nyere n'iwu na -anọgide n'ime Chineke, Chineke na -anọgidekwa n'ime ya. Na site na nke a anyị maara na ọ na -anọgide n'ime anyị, site na Mmụọ onye o nyere anyị.
1 Jọn 4:13, Chineke o nyewo anyị mmụọ ya
Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke mb ;e ọ bula; ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke nānọgide nime ayi, ihu -n'anya -ya mezu -kwa -ra nime ayi. Site na nke a anyị maara na anyị na -anọgide n'ime ya, ya onwe ya na anyị, n'ihi na O nyere ayi nime Mọ -Ya.
Amaokwu Akwụkwọ Nsọ nke na -egosi na Mmụọ Nsọ bụ ihe a ga -anabata:
Ọrụ 1: 4-5 (NIV) chere nkwa nke Nna - a ga -eji mmụọ nsọ mee unu baptizim
Ma mb whilee Ya na ha nānọ, O nyere ha iwu ka ha ghara isi na Jerusalem rigo; chere nkwa nke Nna, nke, ọ sịrị, “ị nụrụ n'ọnụ m; n'ihi na Jọn ji miri me baptism; ma a ga -eji Mụọ Nsọ mee unu baptism ọtụtụ ụbọchị site ugbu a."
Ọrụ 2:38 (ESV), Yị ga -anata onyinye nke Mmụọ Nsọ
Pita wee sị ha, “Chegharịanụ, meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie unu. ị ga -enweta onyinye nke Mmụọ Nsọ.
Ọrụ 8: 14-19 (NIV) ha natara Mmụọ Nsọ - na E nyere mmụọ
Ugbu a, mgbe ndị ozi nọ na Jerusalem nụrụ na Sameria anabatala okwu Chineke, ha zigaara ha Pita na Jọn, ndị gbadatara wee kpeere ha ekpere ka ha mee nata Mọ Nsọ, n'ihi na ọ gbabeghị onye ọ bụla n'ime ha anya, mana emere ha baptizim naanị n'aha Onyenwe anyị Jizọs. Mgbe ahụ ha bikwasịrị ha aka n'isi na ha natara Mmụọ Nsọ. Ugbu a mgbe Saịmọn hụrụ nke ahụ na E nyere mmụọ site n'ibikwasị aka ndị ozi, o nyere ha ego, na -asị, “Nyekwanụ m ike a, ka onye ọ bụla m bikwasịrị m aka n'isi nwee ike. nata Mọ Nsọ. "
Jọn 20:22 (ESV), Rnata Mo Nso
Mb whene O kwusiri nka, O we ku ume na ha, si ha,Nata Mmụọ Nsọ."
(Ndị Efesọs 1:13) The kwere Mmụọ Nsọ nkwa
Nime ya kwa, mgbe ị nụrụ okwu nke eziokwu, ozi ọma nke nzọpụta gị, wee kwere na ya, ejiri akara kaa ya akara na kwere Mmụọ Nsọ nkwa,
Ndị Hibru 6: 4 (NIV) Edetụ ire na onyinye nke eluigwe, ma soro na Mụọ Nsọ
N'ihi na ọ gaghị ekwe omume, n'ihe banyere ndị enwetela nghọta, ndị nwere detụrụ ire ahụ onyinye nke eluigwe, ma soro na Mụọ Nsọ
Amaokwu Akwụkwọ Nsọ nke na -agba akaebe na Mmụọ Nsọ bụ ihe 'ga -ejupụta':
Luk 1:15 (ESV), Fagagh enwe mmuo nso
n'ihi na ọ gābu onye uku n'iru Jehova. Ọ gaghịkwa a drinkụ mmanya ma ọ bụ ihe ọ strongụ strongụ na -aba n'anya, ọ ga -adịkwa jupụta na Mmụọ Nsọ, ọbụna site n'afọ nne ya.
Luk 1:41 (ESV), Fagagh enwe mmuo nso
Mgbe Elizabet nụrụ ekele Meri, nwa nọ ya n'afọ maliri. Ma Elizabet bụ jupụta na Mmụọ Nsọ,
Luk 1:67 (ESV), Fagagh enwe mmuo nso
Nna -ya Zekaraia bu kwa jupụta na Mmụọ Nsọ wee buo amụma, na -asị. ”
Ọrụ 4: 8 (ESV), Fagagh enwe mmuo nso
Mgbe ahụ Pita, jupụta na Mmụọ Nsọ, wee sị ha, “Ndị na -achị ndị mmadụ na ndị okenye
Ọrụ 4: 31 (ESV), Fagagh enwe mmuo nso
Mb whene ha kpesiri ekpere, ebe ha zukọrọ na mara jijiji, ha nile we nọ jupụta na Mmụọ Nsọ wee gaa n'ihu na -ekwu okwu Chineke n'atụghị egwu.
Ọrụ 7: 55 (ESV), FNri nke Mmụọ Nsọ
Mana ọ, jupụta na Mmụọ Nsọ, legidere anya n'eluigwe wee hụ ebube Chineke, na Jizọs ka ọ na -eguzo n'aka nri Chineke.
Ọrụ Ndịozi 9:17 (NIV) Jupụta na Mmụọ Nsọ
Ya mere Ananaịas pụrụ wee banye n'ime ụlọ. O bikwasịrị ya aka n'isi, sị, “Nwanna Sọl, Onyenwe anyị Jisọs, onye pụtara ìhè n'ihu gị n'ụzọ nke i siri bịa zitere m ka i wee hụwa ụzọ. jupụta na Mmụọ Nsọ. "
Ọrụ Ndịozi 11:24 (NIV) Jupụta na Mmụọ Nsọ
n'ihi na ọ bu ezi madu; jupụta na Mmụọ Nsọ na okwukwe. Ọtutu madu we tiyekwasi Onye -nwe -ayi.
Ndị Efesọs 5:18 (ESV), Be juputara na Mmuo
A doụkwala mmanya, n'ihi na nke ahụ bụ ịkwa arụ, kama juputa na Mọ Nsọ
Anyị nọ “n'ime” mmụọ mgbe anyị na -arụ ọrụ n'ike, na -ekwu okwu n'ike mmụọ nsọ Chineke, na n'ekpere. Kama ịbụ “onye” anyị na -ekpegara ma ọ bụ na -efe ofufe, mmụọ nsọ bụ “ihe” anyị na -ekpe ekpere ma na -arụ ọrụ “n'ime”. Enweghị ntụaka na Mmụọ Nsọ bụ onye ekwesịrị ikpe ekpere ma ọ bụ fee ofufe. Kama Mmụọ Nsọ bụ ihe anyị kwesịrị ịrụ ọrụ "n'ime". Ezi ndị na -efe ofufe ga -efe Nna ahụ “n'ime” Mmụọ na eziokwu.
Mak 12:36 (Mkpu), I.n Mmụọ Nsọ
David n'onwe ya, na Mmụọ Nsọ, kwupụtara, 'Onyenwe anyị gwara Onyenwe m, Nọdụ ala n'aka nri m, ruo mgbe m debere ndị iro gị n'okpuru ụkwụ gị.' '.
Ndị Rom 9: 1 (I.n Mmụọ Nsọ
Ana m ekwu eziokwu n'ime Kraịst -ekwughị m okwu ụgha; akọ na uche m na -agbara m akaebe na Mmụọ Nsọ,
1 Ndị Kọrịnt 12: 3, I.n Mmụọ nke Chineke
Ya mere achọrọ m ka ị ghọta na ọ nweghị onye na -ekwu okwu na Mmụọ nke Chineke na -ekwu mgbe ọ bụla "Jizọs bụ onye a bụrụ ọnụ!" ọ dịghịkwa onye nwere ike ịsị “Jizọs bụ Onyenwe anyị” belụsọ na Mmụọ Nsọ
1 Ndị Tesalonaịka 1: 5n Mmụọ Nsọ
n'ihi na ozi ọma anyị bịakwutere unu ọ bụghị naanị n'okwu, kamakwa n'ike na na Mmụọ Nsọ na nkwenye zuru oke. Unu maara ụdị mmadụ anyị gosiri na ha bụ n'etiti unu n'ihi unu
Ndị Efesọs 6:18 (ESV), I.n Mmụọ
na -ekpe ekpere oge niile na Mmụọ, jiri ekpere na arịrịọ niile. Iji mee nke ahụ, jiri ntachi obi niile mụrụ anya, na -arịọsiri ndị nsọ niile arịrịọ ike
(Jọn 4:23) Ndị na -efe ezi ofufe ga -efe Nna m isi na mmụọ
Ma oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a, mgbe ndị na -efe ezi ofufe ga -efe Nna m ofufe na mmụọ na eziokwu, n'ihi na Nna m na -achọ ka ndị dị otú a fee ya ofufe.
Ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ na -agba akaebe na e ji mmụọ nsọ tụnyere ihe a na -ebugharị, enwere ike kewaa ya, ma bụrụ nkewa. Peter n'ụbọchị Pentikọst, na -agụ "Chineke kwuru: m ga -awụpụ mmụọ m" (Ọrụ 2:17, Tyndale) na 1 Jọn 4:13 na -egosi na Chineke enyela anyị mmụọ ya. Aghọtara n'ụzọ nkịtị, Grik pụtara, "ụfọdụ" ma ọ bụ "akụkụ nke" - na -egosi oke ma ọ bụ akụkụ. N'ihi ya, anyị ghọtara na mmụọ nke Chineke bụ ihe enwere ike ikesa ya n'etiti ọtụtụ mmadụ.
Ọnụ Ọgụgụ 11:17 (NIV) Were ụfọdụ Mmụọ ahụ nke dị n'ahụ gị tinye ya
M ga -agbadata gwa gị okwu n'ebe ahụ. M ga -emekwa were ufọdu Mọ Nsọ nke dikwasi gi tukwasi ya, ha ga -esokwa gị buru ibu nke ndị mmadụ, ka ị ghara ibu ya naanị gị.
Ọnụ Ọgụgụ 11:25 (NIV) Were ufọdu nime Mọ nke dikwasiri Ya we tukwasi ọgu ndi -okenye atọ na iri ahu
Jehova wee gbadata n'igwe ojii wee gwa ya okwu, na were ufọdu nime Mọ nke dikwasiri Ya we tukwasi ọgu ndi -okenye atọ na iri ahu. Ozugbo mmụọ ahụ dakwasịrị ha, ha buru amụma…
2 Ndị Eze 2: 9-10 Biko ka oke nke mmụọ gị dị m abụọ
Mgbe ha gafetara, Ịlaịja sịrị Ịlaịsha, “Rịọ ihe m ga -emere gị, tupu e wepụ m n’ebe ị nọ.” Elaisha we si,Biko ka oke nke mmụọ gị dị m abụọ"
2 Ndị Eze 2: 15-16 Mmụọ Ịlaịja dịkwasịrị Ịlaịsha
Ma mgbe ụmụ ndị amụma nọ na Jeriko hụrụ ya na -eche ha ihu, ha sịrị,Mmụọ Ịlaịja dịkwasịrị Ịlaịsha. ” Ha we bia izute ya, kpọ isi ala nye ya. Ha we si ya, Biko, le, ọgu ndikom abua na iri, bú ndi -dìnkpà, nọ n'etiti ndi -orù ​​-gi. Biko hapụ ha ka ha gaa chọọ nna gị ukwu. O nwere ike ịbụ na nke ahụ Spirit Jehovah ejidewo ya tụba ya n’elu ugwu ma ọ bụ n’ime ndagwurugwu ụfọdụ ”
Ọrụ 2: 1-4 (NIV) Asụsụ dị iche iche dị ka ọkụ pụtara n'ihu ha wee dakwasị onye ọ bụla n'ime ha - ha niile juputara na Mmụọ Nsọ
Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ha niile nọkọrọ n'otu ebe. Na mberede, ụda sitere n'eluigwe dara dịka oke ifufe na -efesi ike, o wee jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Na asusu di iche iche nke ire -ọku we puta ìhè nye ha, o we dakwasi onye ọ bula nime ha. Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ike ikwu.
Ọrụ 2:17 (Tyndale), Of Mmụọ m ka m na -awụkwasị mmadụ niile
Ọ ga -abụ n'ụbọchị ikpeazụ, ka Chineke kwuru: of Mmụọ m ka m na -awụkwasị mmadụ niile. Ụmụ unu ndị nwoke na ndị nwanyị ga -ebu amụma, ụmụ okorobịa unu ga -ahụ ọhụụ, ndị agadi unu ga -arọkwa nrọ.
Ọrụ Ndịozi 2:17 Aga m awụkwasị mmụọ m n'ahụ anụ ahụ niile
Ọ ga -erukwa n'ụbọchị ikpeazụ, ka Chineke kwuru, Aga m awụkwasị mmụọ m n'ahụ anụ ahụ niile: umu -unu ndikom na umu -unu ndinyom g shallbu kwa amuma, umu -okorọbia -unu gāhu kwa ọhù, ndi -okenye -unu gārọ kwa nrọ.
Ọrụ Ndịozi 2:17 (NIV) Aga m awụkwasị mmụọ m n'ahụ anụ ahụ niile
Ọ ga -abụkwa n'ụbọchị ikpeazụ, ka Chineke kwuru, Aga m awụkwasị mmụọ m n'ahụ anụ ahụ niile: Umu -unu ndikom na umu -unu ndinyom g shallbu kwa amuma, umu -okorọbia -unu gāhu kwa ọhù, ndi -okenye -unu gārọ kwa nrọ:
Ọrụ Ndịozi 2:17 Na aga m awụpụ mmụọ m n'ime mmadụ niile
'Ọ ga -adịkwa n'ụbọchị ikpeazụ,' ka Chineke kwuru, 'Na aga m awụpụ mmụọ m n'ime mmadụ niile; Umu -ndikom unu na umu -unu ndinyom g SHbu kwa amuma, umu -okorọbia -unu gāhu kwa ọhù, ndi -okenye -unu gārọ kwa nrọ -nrọ;
1 Jọn 4:13, Ọ nyere anyị nke Mmụọ ya
Ọ dighi onye ọ bula huworo Chineke mb ;e ọ bula; ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke na -anọgide n'ime anyị, ịhụnanya ya zukwara oke n'ime anyị. Site na nke a anyị maara na anyị na -anọgide n'ime ya, ya onwe ya na anyị, n'ihi na enye ọnọ nnyịn Mmụọ ya.
Ndị Hibru 2: 4 (NIV) A na -ekesa onyinye nke mmụọ nsọ dịka uche ya siri dị
ebe Chineke gbakwara ama site na ihe iriba ama na ọrụ ebube na ọrụ ebube dị iche iche onyinye nke Mmụọ Nsọ ekesa dị ka uche ya si dị.
Ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ na -egosi na Mmụọ Nsọ nwere ike 'eyikwasị', nwere ike 'ịdakwasị', na enwere ike 'wụsa'. Ụfọdụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ na -akọwa Mmụọ Nsọ ihe nwere ike ịbụ "yiri, ”“ tinye n'ime, ”ma ọ bụ“ yikwasị. ”
Ọnụ Ọgụgụ 11:25 (ESV), Took ụfọdụ n'ime Mmụọ dị n'ahụ ya na tụkwasị ya ndị okenye iri asaa ahụ
Jehova wee gbadata n'igwe ojii wee gwa ya okwu, na were ufọdu Mọ nke dikwasi Ya na tụkwasị ya ndị okenye iri asaa ahụ. Na ozugbo Mmụọ zuru ike na ha, ha buru amụma. Ma ha anọgideghị na -eme ya.
Ọnụ Ọgụgụ 11: 27-29, Ka Jehova tinye mmụọ ya n'ahụ ha
Otu nwa okorobịa gbaara ọsọ gaa gwa Mozis, sị, “Eldad na Medad na -ebu amụma n'ọmụma ụlọikwuu.” Joshua nwa Nun, onye n Mosesjere Moses ozi site na mb hise ọ di na nwata, we si, Onye -nwem Moses, b themochie ha. Ma Moses siri ya, Ì n youkwo ekworo n'ihim? Ọ ga -adị m mma ma a sị na ndị Jehova niile bụ ndị amụma, ka Jehova we tukwasi ha Mọ nke Ya! "
(Aịsaịa 42:1, NIV) M tinyere ya mmụọ m
Lee nwa odibo m, onye m na -akwado, onye m họọrọ, onye ihe ya na -atọ mkpụrụ obi m ụtọ; M tinyere ya mmụọ m; ọ ga -ewepụtara mba niile ikpe ziri ezi
Ezikiel 36:27, NIV Aga m etinye Mmụọ m n'ime gị
na Aga m etinye Mmụọ m n'ime gị, meekwa ka ị na -eje ije n'ụkpụrụ m ma lezie anya irube isi n'iwu m
(Luk 3: 21-22) Mmụọ Nsọ dakwasịrị ya n'ụdị nke anụ ahụ, dị ka nduru
Ugbu a mgbe emere mmadụ niile baptizim, na mgbe e mekwara Jizọs baptizim ma na -ekpekwa ekpere, eluigwe meghere, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ya n'ụdị nke anụ ahụ, dị ka nduru; olu we si n'elu -igwe da, si, I bu Ọkparam M'huru n'anya; ihe gị masịrị m. ”
Luk 4:18 (NLT) Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o nwere tere mmanụ me
"Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o nwere tere mmanụ me
ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitere m ka m kwusaara ndị a dọtara n'agha nnwere onwe na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ka m wee tọhapụ ndị a na -emegbu emegbu.
Jọn 1:33, Onye ahụ nke ị na -ahụ ka Mmụọ Nsọ na -arịdata ma na -anọgidekwa na ya
Mụ onwe m amataghị ya, mana onye zitere m ka m jiri mmiri mee baptizim sịrị m, 'Onye ahụ nke ị na -ahụ ka Mmụọ Nsọ na -arịdata ma na -anọgidekwa na ya, onye a bụ onye na -eji mmụọ nsọ eme baptism. '
Ọrụ 2: 1-4 (NIV) Ewe me ka ha hu ire di iche iche dika ire ọku, o we dakwasi onye ọ bula nime ha
Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ha niile nọkọrọ n'otu ebe. Na mberede ebe ahụ si n'eluigwe bịa ụda dị ka oke ifufe na -efesi ike, o wee jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ewe me ka ha hu ire di iche iche dika ire ọku, o we dakwasi onye ọ bula nime ha. Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka Mmụọ Nsọ nyere ha ike ikwu.
Ọrụ Ndịozi 10:44 (NIV) Mmụọ Nsọ dakwasịrị mmadụ niile
Mgbe Pita ka na -ekwu ihe ndị a, Mmụọ Nsọ dakwasịrị mmadụ niile onye nuru okwu. Ibobo we nwua ndi kwere n'aru, ndi sitere n'ibì -úgwù, ndi soro Pita bia;
Ọrụ Ndịozi 11:15 (NIV) Mọ Nsọ dakwasịrị ha
Ka m malitere ikwu okwu, Mọ Nsọ dakwasịrị ha dị ka ọ dịrị anyị na mbido. Echetakwara m okwu Onyenwe anyị, otu o siri sị, 'Jọn jiri mmiri mee baptizim, mana ị ga -eme ya baptizim na Mmụọ Nsọ. '
Amaokwu Akwụkwọ Nsọ na -akọwa Mmụọ Nsọ na ihe ahụ is "Wụsara":
(Aịsaịa 32:15, NIV) a na -awụkwasị anyị Mmụọ site n'elu
ruo mgbe a na -awụkwasị anyị Mmụọ site n'elu, ọzara wee ghọọ ubi na -amị mkpụrụ, a na -ewerekwa ubi mkpụrụ osisi ọhịa.
(Aịsaịa 44:3, NIV) M ga -awụkwasị mkpụrụ gị mmụọ m
N'ihi na M'gāwukwasi miri n'ala akpiri nākpọ nku, na iyi n'elu ala -akọrọ;
M ga -awụkwasị mkpụrụ gị mmụọ m, na ngọzi m na ụmụ gị.
Ezikiel 39:29, NIV I wụsa Mmụọ m n'elu ulo Israel
Agaghịkwa m ezonahụ ha ihu m ọzọ, mgbe I wụsa Mmụọ m n'elu ulo Israel, ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru. ”
(Joel 2: 28-29) M ga-eme ya wukwasi Mọm n'aru anu -aru nile
“Ọ ga -erukwa n'ikpeazụ, na M ga-eme ya wukwasi Mọm n'aru anu -aru nile; umu -unu ndikom na umu -unu ndinyom g shallbu amuma, ndi -okenye -unu gārọ nrọ, umu -okorọbia -unu gāhu kwa ọhù. Ọbụnadị na ndị odibo nwoke na ụmụ nwanyị n’oge ahụ ga -awụpụ Mmụọ m.
Ọrụ 2: 17 (Tyndale), Of Mmụọ m I n'ihi na si na mmadụ niile
Ọrụ Ndịozi 10:44 (NIV) Mmụọ nsọ a wụfuru
Mgbe Pita ka na -ekwu ihe ndị a, mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ. Ọ jukwara ndi kwere ekwe n'etiti ndị e biri úgwù, ndị soro Pita bịa, anya, n'ihi onyinye nke onyinye Mmụọ nsọ a wụfuru ọbụnadị na ndị Jentaịl.
Okwu mee baptizim pụtara mikpuo ma ọ bụ mikpuo. Ọtụtụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ na -egosi Mmụọ Nsọ bụ ihe ndị kwere ekwe nwere ike ime baptizim, n'adịghị ka baptizim ime mmiri. Ịnata Mmụọ Nsọ yiri ịmụ mmadụ ọzọ. Ịnata Mmụọ Nsọ yiri ịmụ mmadụ ọzọ. N'adịghị ka mmiri nkịtị, Mmụọ nsọ bụ mmiri dị ndụ nke anyị nwere ike rie ma drinkụọ. Mmụọ a ga -esi n'ime obi anyị na -asọpụta dị ka osimiri nke mmiri ndụ:
Luk 3:16 (NLT) Ọ ga mee Mmụọ Nsọ na ọkụ.
Jọn zara ha niile, sị, “Eji m mmiri mee unu baptizim, mana onye ahụ dị ike karịa m na -abịa, eriri akpụkpọ ụkwụ onye m na -erughị eru ịtọpụ ya. Ọ ga mee Mmụọ Nsọ na ọkụ.
Ọrụ Ndịozi 1:5 (NIV) Ị ga-abụ baptizim na Mmụọ Nsọ
n'ihi na Jọn ji miri me baptism; mana ị ga -abụ baptizim na Mmụọ Nsọ ọ bụghị ọtụtụ ụbọchị site ugbu a. ”
Ọrụ 2:38 (ESV), Yị ga -anata onyinye nke Mọ Nsọ
Pita wee sị ha, “Chegharịanụ, meekwa onye ọ bụla n'ime unu baptizim n'aha Jizọs Kraịst maka mgbaghara nke mmehie unu. ị ga-enweta onyinye nke Mọ Nsọ.
Ọrụ Ndịozi 11: 15-16ị ga -abụ baptizim na Mmụọ Nsọ
Ka m malitere ikwu okwu, Mmụọ Nsọ dakwasịrị ha dịka ọ dakwasịrị anyị na mbido. M wee cheta okwu Onyenwe anyị, ka o kwuru, 'Jọn jiri mmiri mee baptizim, mana ị ga-abụ baptizim na Mmụọ Nsọ. '
Jọn 1:33, Onye ọ bụla ị hụrụ ka Mmụọ Nsọ na -arịdata ma na -anọgidekwa na ya, onye a bụ onye ji mmụọ nsọ na -eme baptizim
Mụ onwe m amataghị ya, mana onye zitere m ka m jiri mmiri mee baptizim sịrị m, 'Onye ọ bụla ị hụrụ ka Mmụọ Nsọ na -arịdata ma na -anọgidekwa na ya, onye a bụ onye ji mmụọ nsọ na -eme baptizim. '
Jọn 3: 5-8 (ESV), Uọ buru na amughi madu site na miri na Mọ Nsọ, ọ pughi ibà n'ala -eze Chineke
Jisus zara, “N'ezie, n'ezie, asim unu, ọ gwụla ma amụrụ mmadụ site na mmiri na Mmụọ, ọ nweghị ike ịbanye n'alaeze Chineke. Ihe a mụrụ site n'anụ ahụ bụ anụ ahụ, nke ahụ bụkwa ihe nke Mmụọ Nsọ mụrụ bụ mmụọ. Ka ọ ghara iju gi anya na M'siri gi, Aghaghi imu unu ọzọ. Ifufe na -efega ebe ọ chọrọ, ị na -anụkwa ụda ya, ma ị maghị ebe o si bịa na ebe ọ na -eje. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla nọ nke Mmụọ Nsọ mụrụ. "
Jọn 4:10 (ESV), Lakwa mmiri
Jisus zara ya, si, Ọ buru na i matara onyinye Chineke, na onye ọ bu nke nāsi gi, Nyem miri ka M'drinkua. ị gaara ajụ ya, ọ gaara enye gị mmiri na -enye ndụ. "
(Jọn 7: 37-39) O si n'obi ya ga -asọba osimiri nke mmiri ndụ
N'ụbọchị ikpeazụ nke oriri ahụ, bụ nnukwu ụbọchị, Jizọs biliri wee tie mkpu, "Ọ bụrụ na akpịrị na -akpọ onye ọ bụla nkụ, ya bịakwute m. ọṅụṅụ. Onye ọ bụla nke na -ekwere na m, dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo, O si n'obi ya ga -asọba osimiri nke mmiri ndụ'" Ma nka ka O kwuru bayere Mọ Nsọ, onye ndị kwere na ya ga -anabata, n'ihi na ma enyebeghị Mmụọ ahụ, n'ihi na e nyebeghị Jizọs otuto.
1 Ndị Kọrịnt 12:13 N'ime otu Mmụọ, e mere anyị niile baptizim n'otu ahụ
n'ihi na na otu Mmụọ ka e mere anyị niile baptizim n'ime otu ahụ—Ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ndị ohu ma ọ bụ ndị nweere onwe ha — emekwara ihe niile ị drinkụ otu Mmụọ.
(Ndị Efesọs 5:18) A getụkwala mmanya na mmanya - kama juputa na Mọ Nsọ
na a getụkwala mmanya, n'ihi na nke ahụ bụ ịkwa iko, kama juputa na Mọ Nsọ,
A na -akpọ Mmụọ Nsọ dịka “Mmụọ nke eziokwu (Jọn 14:17) na n'ụzọ dị iche iche na -anọchite anya mmetụta ma ọ bụ ike. Enwere ike iji “mmụọ nke ụwa” tụnyere “mmụọ nke sitere na Chineke” (1 Ndị Kọrịnt 2:12). Mmetụta asọmpi ndị a na -arụ ọrụ n'ụwa. Onye ọ bụla bụ mmetụta na -esite na isi mmalite nke na -ewepụta akparamagwa, akparamagwa, ma ọ bụ “mkpụrụ” dị iche iche. Mmụọ Nsọ na -eduzi ndị mmadụ na uche Chineke ịbụ “ume” ya, “ifufe,” “aka” ma ọ bụ “mkpịsị aka” ya. A kọwara ọtụtụ ọrụ a rụzuru site na nchịkwa nchịkwa nke Chineke n'amaokwu ndị a:
Luk 4:1 (NLT) Mmụọ nsọ duru ya n'ịkpa
Jisus we juputa na Mọ Nsọ, si na Jọdan laghachi Mmụọ Nsọ duuru ya bata n'ọzara.
(Luk 4: 18-19) Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma
"Mmụọ nke Onyenwe anyị dịkwasịrị m, n'ihi na o tere m mmanụ ikwusara ndị ogbenye ozi ọma. O zitere m ka m kwusaara ndị a dọtara n'agha nnwere onwe na ime ka ndị ìsì hụ ụzọ, ịtọhapụ ndị a na -emegbu emegbu, ikwusa afọ amara nke Onyenwe anyị. "
Ọrụ Ndịozi 10:38 (NIV) Chineke tere Jizọs onye Nazaret mmanụ na Mmụọ Nsọ na n'ike
otú Chineke si tee Jizọs onye Nazaret mmanụ na Mmụọ Nsọ na n'ike. Ọ gara na -eme ihe ọma na na -agwọ ndị niile ekwensu megburu, n'ihi na Chineke nọnyeere ya.
1 Ndị Kọrịnt 2: 9-13. Ihe ndị a ka Chineke kpugheere anyị site na Mmụọ. N'ihi na Mmụọ na -enyocha ihe niile
Ma, dị ka e dere, "Ihe anya adịghị ahụ, nke ntị na -anụbeghị, ma ọ bụ obi mmadụ chere, ihe Chineke kwadebeere ndị hụrụ ya n'anya" - ihe ndị a ka Chineke kpugheere anyị site na Mmụọ. N'ihi na Mmụọ na -enyocha ihe niile, ọbụna omimi nke Chineke. N'ihi na ònye maara echiche mmadụ ma e wezụga mmụọ nke onye ahụ, nke dị n'ime ya? Otu a kwa ọ dịghị onye na -aghọta echiche nke Chineke belụsọ mmụọ nke Chukwu. Ugbu a anyị anabataghị mmụọ nke ụwa, kama mmụọ nke sitere na Chineke, ka anyị wee ghọta ihe ndị Chineke nyere anyị n'efu. Anyị na -enyekwa nke a n'okwu na -ejighi amamihe mmadụ kụziere mana nke Mmụọ Nsọ kuziri, na -akọwa eziokwu nke mmụọ nye ndị nke mmụọ.
1 Ndị Kọrịnt 14:1 Na -achọsi ike onyinye nke mmụọ, ọkachasị ka unu wee buo amụma
Na -achụso ịhụnanya, na -achọsi ike onyinye nke mmụọ, ọkachasị ka unu wee buo amụma.
1 Ndị Kọrịnt 2: 10-12. N'ihi na Mmụọ na -enyocha ihe niile, ọbụna omimi nke Chineke
Ihe ndị a Chineke kpugheere anyị site na Mmụọ. N'ihi na Mmụọ na -enyocha ihe niile, ọbụna omimi nke Chineke. N'ihi na onye maara echiche mmadụ ma e wezụga mmụọ nke onye ahụ, nke dị n'ime ya? Otu a kwa ọ dịghị onye na -aghọta echiche nke Chineke belụsọ mmụọ nke Chukwu. Ugbu a anyị anatabeghị mmụọ nke ụwa, kama ọ bu Mọ nke sitere na Chineke, ka ayi we mara ihe Chineke nyere ayi n'efu.
Ndị Rom 8: 13-14 N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke.
N’ihi na ọ buru na i di ndu dika anu-aru si di, inwu anwu, ma ọ buru na i jiri Mọ Nsọ me ka omume nile nke aru di ndu, i gha adi ndu. N'ihi na ndị niile mmụọ Chineke na -edu bụ ụmụ Chineke.
Ndị Rom 8:27 (NIV) Mmụọ na -arịọrọ ndị nsọ arịrịọ dịka uche Chineke si dị
Na onye na -enyocha obi maara ihe bụ uche nke Mmụọ, n'ihi na Mmụọ na -arịọrọ ndị nsọ arịrịọ dịka uche Chineke si dị.
Ndị Rom 14:17 (ESV), Rezi omume na udo na ọńụ n'ime Mmụọ Nsọ
N'ihi na alaeze Chineke abụghị ihe oriri na ị drinkingụ ihe ọ butụ butụ, kama ọ bụ ihe ezi omume na udo na ọ joyụ n'ime Mmụọ Nsọ.
Ndị Rom 15:16 (NIV) Dịrị nsọ site na Mụọ Nsọ
ka ha buru onye n ministerjere Kraist Jisus ozi nye ndi mba ọzọ n'ozi ndi -nchu -àjà nke ozi ọma nke Chineke, ka àjà nke ndi mba ọzọ we di, nsọ site na Mụọ Nsọ.
Ndị Rom 15:19 (NIV) The ike nke ihe iriba -ama na ọlu -ebube, site n'ike nke Mọ nke Chineke
by na ike nke ihe iriba -ama na ọlu -ebube, site n'ike nke Mọ nke Chineke—Ya mere na site na Jerusalem na gburugburu ya ruo Ilirikọm, emechala m ozi nke ozioma nke Kraịst
(Ndị Galetia 5: 22-25) Mkpụrụ nke Mmụọ bụ ịhụnanya, ọ joyụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma…
ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọ joyụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi, ịdị nwayọọ, njide onwe onye; ọ dịghị iwu na -emegide ihe ndị dị otú a. Ma ndi nke Kraist Jisus kpogidere anu -aru n'obe, ya na agu ihe ọjọ nile ya. Ọ bụrụ na anyị na -ebi ndụ site na mmụọ nsọ, ka anyị na -esokwa mmụọ nsọ.
(Ndị Efesọs 2: 18-22) A na -ewukọkwa unu ọnụ ịbụ ebe obibi Chineke site na Mmụọ
N'ihi na site n'aka ya anyị abụọ nwere ohere n'otu mmụọ nye Nna. Yabụ na ị bụghịzi ndị ọbịa na ndị mbịarambịa, kama unu bụ ụmụ amaala nke gị na ndị nsọ na ndị otu ezi -na -ụlọ nke Chineke, nke ewuru n'elu ntọala nke ndị ozi na ndị amụma, Kraịst Jizọs n'onwe ya bụ isi nkuku, onye nhazi ya niile dị n'ime ya. ejikọtara ọnụ, na -eto n'ime ụlọ nsọ dị nsọ n'ime Onyenwe anyị. N'ime ya a na -ewukọkwa unu ọnụ ịbụ ebe obibi Chineke site na Mmụọ.
1 Pita 1:2 (NIV) Edisana Spirit
dị ka ịmara Chineke Nna tupu mgbe, n'ime nsọ nke Mmụọ Nsọ, maka nrube isi nye Jizọs Kraịst na iji ọbara ya fesa: Ka amara na udo dịrị gị.
Taịtọs 3: 5 (NIV) Site n'ịsacha nke ịmụghachi ihe na mmeghari ohuru nke Mo Nso
ọ zọpụtara anyị, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị mere n'ezi omume, kama dịka ebere ya si dị, site n'ịsa ịhaghachi azụ na mmeghari ohuru nke Mo Nso
Mgbe mmadụ na -enupụrụ isi ma ọ bụ na -eleda mmetụta ịchịkwa Chineke anya, nke metụtara ọnụnọ Chineke, enwere ike ikwu na onye ahụ na -eru uju, na -eguzogide, ma ọ bụ na -emenyụ mmụọ ya:
Aịsaịa 63:10 (ESV), They nupụrụ isi wee wute Mmụọ Nsọ ya
ma ha nupụrụ isi wee wute Mmụọ Nsọ ya; ya mere ọ tụgharịrị bụrụ onye -iro ha, ma ya onwe ya busoro ha agha.
Ọrụ 5: 3 (ESV), Lntụgharị nye Mmụọ Nsọ
Ma Pita sịrị, “Ananayas, gịnị mere Setan ji jupụta gị n'obi ghaara Mụọ Nsọ ụgha na idebere onwe -gi akụkụ nke ihe ala ritere?
Ọrụ Ndịozi 7:51 (NIV) Ị na -eguzogide Mmụọ Nsọ mgbe niile
“Unu ndị na-ekwesi olu ike, ndị a na-ebighị úgwù n'obi na ntị, ị na -eguzogide Mmụọ Nsọ mgbe niile. Dị ka nna nna unu mere, unu onwe unu.
(Ndị Efesọs 4:30) adịghị na -ewute Mmụọ Nsọ nke Chineke
na emela na -ewute Mmụọ Nsọ nke Chineke, Onye esiri na unu kaa unu akara maka ụbọchị mgbapụta.
1 Ndị Tesalonaịka 5: 19 adịghị imenyu Mmụọ
adịghị imenyu Mmụọ
(Abụ Ọma 51: 11) Anarala m Mmụọ Nsọ gị
Achụpụla m n'ihu gị, anarakwala m Mmụọ Nsọ gị.
(Luk 12: 10-12) A gaghị agbaghara onye na -ekwulu Mmụọ Nsọ
Na onye ọ bụla nke na -ekwu okwu megide Nwa nke mmadụ, a ga -agbaghara ya, kama onye ọ bụla nke na -ekwulu Mmụọ Nsọ, a gaghị agbaghara ya. Ma mgbe ha kpọtara gị n'ihu ụlọ nzukọ na ndị isi na ndị ọchịchị, echegbula onwe gị maka otu ị ga -esi gbachitere onwe gị ma ọ bụ ihe ị ga -ekwu, n'ihi na Mmụọ Nsọ ga -akụziri gị n'oge ahụ ihe ị ga -ekwu. ”
Nkwulu nke Mmụọ Nsọ na -ekenye ọrụ nke Chineke n'aka ndị ọzọ dị ka mmụọ ọjọọ ma ọ bụ mmụọ na -adịghị ọcha. Nke a na -ekenye ihe dị nsọ ụgha n'ihe na -adịghị ọcha.
(Mak 3: 22-30) Onye ọ bụla nke na -ekwulu Mmụọ Nsọ enweghị mgbaghara
Na ndị odeakwụkwọ ndị si na Jerusalem rịdata na -asị, "Ọ nwere Beelzebul," na "site n'aka onye isi ndị mmụọ ọjọọ ọ na -achụpụ ndị mmụọ ọjọọ." O we kpọ ha biakute ya, were ilu gwa ha, si, Olee otú Setan ga -esi chụpụ Setan? Ọ bụrụ na alaeze ekewaa megide onwe ya, alaeze ahụ agaghị eguzoli. Ọ bụrụkwa na ụlọ ekewaa megide onwe ya, ụlọ ahụ agaghị enwe ike iguzo. Ọ buru kwa na Setan ebiliwo megide onwe -ya, kewa kwa, ọ pughi iguzo, kama ọ nāgwusi. Ma ọ dighi onye ọ bula puru ibà n'ulo onye di ike puta ihe -ya, ma ọ buru na o bughi uzọ ke onye ahu di ike absu. Mgbe ahụ ọ pụrụ n'ezie ịkwakọrọ ihe dị n'ụlọ ya. N'ezie asị m unu, a ga -agbaghara ụmụ mmadụ mmehie niile, na nkwulu ọ bụla ha na -ekwu, mana onye ọ bụla nke na -ekwulu Mmụọ Nsọ enweghị mgbaghara, mana ọ mara ikpe mmehie ebighị ebi ” - n'ihi na ha nāsi, O nwere mọ nādighi ọcha. "
Ọtụtụ ndị akaebe Akwụkwọ Nsọ na ngalaba ndị dị n'elu na -agba akaebe na Mmụọ Nsọ bụ Onyinye sitere na Chineke, na ọ bụ ihe mmadụ nwere ike ịnata, jupụta, tinye, tinye ya, ma mee ya baptizim na ọ bụ ihe nke a na -enyefe ma nwee ike kee ya. Ihe a niile na -egosi na Mmụọ Nsọ bụ Mmetụta Ịchịkwa Chineke kama ịbụ onye ya na Chineke na -akpakọrịta. Ọ bụ ezie na Mmụọ Nsọ na -eme Chineke onye, ​​ọ na -egosipụta agwa Nna, ọ na -emezukwa uche Chineke, Mmụọ Nsọ n'onwe ya abụghị onye. Asụsụ e ji mee ihe n'akwụkwọ nsọ metụtara Mmụọ Nsọ na -eme ka echiche ghara ịdị na mmụọ nke Chineke bụ onye dị iche na Nna. Akwụkwọ Nsọ na -agba akaebe na Mmụọ Nsọ bụ ihe karịa mmadụ.
Okwu Grik maka “mmụọ” (peneuma) na -anọchi anya na -egosi ya dị ka aha adịghị adị. Aha ndị ọzọ na -ekwu maka ọrụ nke mmụọ nsọ na -abụ mgbe ụfọdụ n'ụdị nwoke. Grik, dị ka ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ gụnyere Spanish, French, German, Latin, na Hibru na -ekenye aha nwoke n'agbanyeghị na ha anaghị ekwu maka ihe dị ndụ. Iwu ụtọasụsụ Greek bụ na okike nke nnọchiaha nnọchi anya ọ bụla ga -adakọrịrị na aha. Dịka ọmụmaatụ, a ga -ewere oriọna dị ka “ọ” n'asụsụ Grik n'agbanyeghị na o doro anya na oriọna anaghị adị ndụ ma ọ bụ onye. Ịkpọ aha na nnọchiaha na -ebutekarị mgbagwoju anya n'ihe gbasara ịsụgharị amaokwu ndị metụtara Mmụọ Nsọ, ọkachasị n'ihe gbasara ọrụ nke Mmụọ Nsọ dịka "Ntinye aka" (parakletos) nke a na -atụgharịkarị dịka "Onye inyeaka," "Onye nkasi obi," “Onye Ndụmọdụ,” ma ọ bụ “Onye Aririọ.”
Ndị ntụgharị Agba Ọhụrụ, na -ebu echiche Atọ n'Ime Otu, na -ejikarị nnọchiaha nwoke dị ka "ọ," "ya," "onye," ma ọ bụ "onye" nke a ga -atụgharị dị ka "ya," "ya," "n'onwe ya," na " nke ”maka nnọchiaha nke na -ekwu maka Mmụọ Nsọ. N'ịbụ nke a tụgharịrị n'ụzọ ziri ezi, ikpe maka igosipụta Mmụọ Nsọ dị ka onye dị iche na Nna adịghị nso. Nghọta nke nkà mmụta okpukpe nke Ndị Kraịst enweghị ike ịdabere na nnọchiaha ole na ole, kama nke ahụ, a ga -etinyerịrị ya na nguzozi nke Akwụkwọ Nsọ na ịdị arọ nke ihe akaebe nke Akwụkwọ Nsọ ewepụtara na ngalaba ndị dị n'elu.
A na -aghọta Mmụọ Nsọ nke ọma dịka ihe ndị kwere ekwe na -enweta. Ịtụle na Mmụọ Nsọ bụ Mmetụta ịchịkwa Chineke. Ngosipụta na ọ bụ Mmụọ anaghị ekwu n'onwe ya, dị na John 16: 12 nke na -ekwu, "Mgbe Mmụọ nke eziokwu bịara,… Ọ bụ ezie na enwere ike iji onye na -ede abụ mee ihe maka Onye nkasi obi/onye inyeaka, nke a bụ okwu ihe atụ. Mmụọ Nsọ nwere ike ịpụta n'ụdị mmadụ n'ihi na ọ na -anọchite anya ọdịdị na agwa nke Chineke - ọ bụghị n'ihi na Mmụọ Nsọ n'onwe ya bụ onye. Site na Chineke ịchịkwa mmetụta, Mmụọ Nsọ na -enye iwu, machibido, gosi, kwuo, ma ọ bụ duzie mmadụ ọzọ.
Ọrụ Ndịozi 1:2 (NIV) O nyere nyere n'iwu site na Mmụọ Nsọ
ruo ụbọchị e buliri ya, mgbe o nyere nyere n'iwu site na Mmụọ Nsọ ọnọ mme apostle emi enye emekde.
Ọrụ 16: 6 (ESV), Họ dị nke Mmụọ Nsọ machibidoro iwu
Ha we gabiga n'ógbè Frijia na Galetia, ịbụ nke Mmụọ Nsọ machibidoro iwu ikwu okwu na Asia.
Ọrụ Ndịozi 20:28 (NIV) Mmụọ Nsọ emewo unu ndị nlekọta
Lezienụ onwe unu na ìgwè atụrụ niile anya nke ọma Mmụọ Nsọ emewo unu ndị nlekọta, ilekọta ụka nke Chineke…
Ọrụ Ndịozi 28:25 (NIV) Mmụọ Nsọ ziri ezi n'ikwu
Ma na -arụrịta ụka n'etiti onwe ha, ha hapụrụ mgbe Pọl kwuchara otu okwu:Mmụọ Nsọ ziri ezi n'ikwu site n'aka Aisaia onye -amuma
(Ndị Hibru 3: 7-8) Dị ka Mmụọ Nsọ kwuru
Ya mere, dika Mmuo Nso kwuru, “Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emela ka obi unu sie ike dịka n'oge nnupụisi, n'ụbọchị ule n'ime ọzara
Ndị Hibru 9: 8 (NIV) Mmụọ Nsọ na -egosi
Site na nke a Mmụọ Nsọ na -egosi na a mepebeghị ụzọ ịbanye n'ebe nsọ ma ọ bụrụhaala na akụkụ nke mbụ ka kwụ
Ndị Hibru 10: 15 (NIV) Mmụọ Nsọ na -agbakwa ama
na Mmụọ Nsọ na -agbakwa ama nye anyị; n'ihi na mgbe o kwusịrị
1 Pita 1:12 (NIV) Kwusara unu ozi ọma site na Mmụọ Nsọ nke si n'eluigwe zite
E kpughere nye ha na ha anaghị ejere onwe ha ozi kama ọ bụ gị, n'ihe ndị dị ugbu a mara ọkwa nye gị site n'aka ndị kwusara unu ozi ọma ahu site na Mọ Nsọ nke esitere n'elu -igwe zite, ihe ndị mmụọ ozi na -achọsi ike ile anya n'ime ya